"Shaqaalaha Somaliland waxa dalalka ay jaarka yihiin dhaafiyey waa kartidooda iyo aqoontooda".Gudoomiyaha Kulmiye Germany - Haldoornews | Haldoornews
Hambalyo Maalinta Shaqaalaha, 01. May. 2021
Xisbiga #Kulmiye laantiisa Jarmalku waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan dhamaan u adeegayaasha dalkeena, Ciidanka qalabka sida, kuwa nabada dhowra, Macalimiinta, Saxaafada, cashuur bixiyayaasha, ururada xuquuqda aadamaha u dooda, dhakhaatiirta iyo dhamaan mihnadlayaasha caafimaadka, qareenada ku howlan cadaalada, Asluubta, Beeralayda, Ganacsatada, dhamaan shaqaale weynaha kuwa dawlada iyo kuwa gaarka ahba, hambalyo hambalyo.
Dal walba waxa dalka kale dhaafiya waa kartida, adkeysiga, madax furnaanta, curinta, hufnaanta iyo daacadnimada shaqaaluhu ay dalkooda iyo dadkoodaba ugu adeegaan.
Shaqaalaha Somaliland waxa dalalka ay jaarka yihiin dhaafiyey waa kartidooda iyo aqoontooda, mahadsanidiin, waxaad naga dhigteen kuwo qab-weyn.
Dalkeena Slland waxa uu ka mid yahay wadamada shaqo-la’aantu ka jirto, taasi inagamay baajin in aan marwalba hore u socono oo sanad walba shaqo abuur yimaado.
Caqabad kasta oo adduunyadu soo waajahdo waan kala simanahay waxa se intaa inoo dheer in aynaan aqoonsi caalami ah ka helin dunnida. Waxa hubaal ah in aqoonsigu wax weyn ka tari lahaa in si xawli ah shaqo abuur loo sameeyo, haddana Xukuumadeena iyo ganacsatadeenu waxay markastaba diyaar u yihiin in ay dadaalkooda dadaal ku daraan oo da’yarta loo abuuro shaqo, shaqaalaha dawladuna helaan xuquuq.
Hambalyo, Ramadaan Kareem, Madaxiinuna kor.
Gudoomiyaha Laanta Xisbiga Kulmiye Germany